कोबिनि हस्पिटालटी सुरु
रन्जन यादव मंसिर २, २०७५
जीतपुर । कोबिनि हस्पिटालटी म्यानेजमेन्ट प्रा.लि सिमराको एक कार्यक्रमका बीच जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेलले उद्घाटन गरेका छन् । होटल ट्रेनिङ दिने उदेश्यले खोलिएको ट्रेनिङ सेन्टर प्रदेश नं.२ को पहिलो ईन्सिटीच्युट रहेको कोबिनी हस्पिटालटी म्यानेजमेन्टका सञ्चालक कोमल न्यौपानेको दाबी छ ।
उदघाटनको क्रममा मेयर डा. पौडेलले सस्तो र सुल्भ मुल्यमा प्रशिक्षार्थीलाई ट्रेनिङ दिन सल्लाह दिनुभयो । कार्यक्रममा होटल ब्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष मोहन सर्मा लामिछाने ,जीतपुरसिमरा नगर उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन लम्साल र बिभिन्न सञ्चारमाध्यमका सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सञ्चारकर्मी प्रदिप गौतमले गरेका थिए